Brucite waa qaab macdanta magnesium hydroxide - fiidiyow
Ka iibso boogta dabiiciga ah dukaankeena
Brucite waa nooca macdanta ee magnesium hydroxide, oo ay la socoto qaaciddada kiimikada ee Mg (OH) 2. Waa shey wax ka badal caam ah oo ku sameysan marmar, macdanta biyaha heerkulka hooseeya ee tamarta kuleylka ah ee loo yaqaan 'chlorite schist' iyo koloriin kuleylka, waxaana la sameeyay inta lagu gudajiro qoob ka ciyaarka. Brucite waxaa badanaa laga helaa iyada oo lala xiriirinayo agwọta (macaane), calcite, aragonite, dolomite, magnesite, hydromagnesite, artinite, talc iyo chrysotile.
Waxay ku dhejinaysaa qaab-dhismeedka CdI2-u eg qaabab leh hydrogen-bonds inta udhaxeysa lakabyada.
Brucite waxaa markii ugu horreeyay la sharraxay 1824 waxaana loo magacaabay soosaaraha, cilmi-baareyahan reer Mareykan ah, Archibald Bruce (1777-1818). Noocyo badan ayaa loo yaqaan 'nemalite'. Waxay ku dhacdaa fiber ama deyrar, inta badan weheliya, laakiin mararka qaarkood jihooyinka qaylada leh.
Meel caan ah oo ku yaal Mareykanka waa Wood's Chrome Mine, Cedar Hill Quarry, Gobolka Lancaster, Pennsylvania. Jaale, cadaan iyo buluug ah oo leh dabeecad botryoidal ayaa laga helay Degmada Qila Saifullah ee Gobolka Baluchistan, Pakistan. Ka dibna daahfurka dambe ee Brucite wuxuu sidoo kale ka dhacay Bela Ophiolite ee Wadh, Degmada Khuzdar, Gobolka Baluchistan, Pakistan. Quruxdani waxay sidoo kale ka dhacday South Africa, Italy, Russia, Canada, iyo deegaano kale sidoo kale daahfurka ugu caansan ayaa ah tusaalooyinka Mareykanka, Ruushka iyo Bakistaan.
Micnaha Brucite, awoodaha, faa iidooyinka, bogsashada iyo guryaha sifooyinka leh
Brucite ayaa kaa caawin doona dhowr siyaabood oo ay ka mid yihiin:
Waxaa la ogyahay inay leedahay guryo bogsasho oo aad u wanaagsan oo ay kujirto caawinta xakamaynta heerkulka jirka
Macdantaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay tamar laga yaabo inay jirka ka caawiso inuu la tacaasho alkalinity-ka xad-dhaafka ah.
Waxay caawin kartaa dhibaatooyinka xiidmaha waxayna yareyn kartaa halbowlayaasha jirka oo googo'ay.
Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa inay ka caawiso nabarrada iyo kaalmaynta dhibaatooyinka muruqyada dhexdooda iyadoo la xoojinayo kaabista iyo adkeysiga.
Brucite ayaa sidoo kale loo aqoonsan yahay inuu taageerayo bogsashada lafaha jajaban waxaana la ogyahay inay yareyso neuralgia iyo xanuunka laabatada.
Iyada oo loo marayo ficilkeeda si loo furo chakra taaj waxaa loo sheegaa in uu yareynayo xanuunka madax xanuunka iyo dhanjafka. U adeegso taajka 'chakra' si aad kor ugu qaaddo naftaada, u kobciso fakarkaaga una hagaajiso niyaddaada.
Brucite waxay leedahay gariir faa iido leh oo laga yaabo inay kugu caawiso inaad shaaca ka qaaddo haddii xaalada aad ku lug leedahay ay dantaada ugufiican tahay.
Kuwa xiriirka shaqsiyeedka ah halkaad dareento inaysan hadda adiga kugu habboonayn oo laga yaabo inuu dhammaadku yimaado, tamarta dhagaxan ayaa kaa caawin doonta inaad go'aan ka gaarto tallaabada aad qaadi lahayd.
Brucite, oo ka yimid Pakistan
Waxaan ku samaynaa sida loo yaqaan 'crucite dahabka' sida garka, silsiladka, hilqado, silsilad iyo pendant.